आफू भन्दा धनी केटी लभ पारेर बिहे गर्दा यस्तो बिजाेग, छोरा बोकेर श्रीमान रूँदै मिडियामा - News 88 Post
May 1, 2021 N88LeaveaComment on आफू भन्दा धनी केटी लभ पारेर बिहे गर्दा यस्तो बिजाेग, छोरा बोकेर श्रीमान रूँदै मिडियामा
सामाजिक सञ्जाल खासगरी युट्युवमा पारिवारिक कलहका अनेक काण्डहरू खुबै भाइरल हुने गरेका छन् । वर्षाैदेखि वा लामाे समयदेखि कुण्ठीत भावनाहरू र बेदनाहरू अब युट्युवरहरूसँग धेरैले पाेख्न थालेका छन् । उसै त अरूकाे दुःखकाे रमिता हेर्न पल्केकाे याे समाज अनि दुनियाँका अगाडी रमिता देखाइरहेकाहरू रातारात भाइरल भइरहेका छन् । कतिपय त यस्ताे लाग्छ भाइरल हुनकै लागि नै यसरी मिडियामा खुल्ने गरेका छन् । हुन त उनीहका पीडा कस्ताे महसुश भइरहेकाे छ भन्ने कुरा उनीहरू नै जानून् ।
पारिवारिक कलह खटपट किन आइरहेका छन् त्यसकाे समाधान वा निराकरणकाे बाटाे न्यायकाे बाटाे के हुन सक्छ ? स्थानीय सरकारले गाउँ समाज र परिवारका सामान्य झैझगडा मिलाउन भन्दै न्यायिक समिति पनि बनाएकाे छ तर पीडित भनिएकाहरू न्याय खाज्न युट्युव र मिडियाका विश्वास बढी गर्छन् ।
अस्पतालको ढोकामा मान्छे मर्न थाले सरकार, तपाईँ बालुवाटारमा के काे बटन थिच्दै हुनुहुन्छ ?
आयोगबाट निस्किदा रेशम चौधरीले के – के भने ?